TORITENY Alahady 15 Jona 2014 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 15 Jona 2014
« MAMONJY NY VOAFATOTRA TOMPO »
I Samoela 25 : 32 – 38 / Lioka 8 : 26 – 37 / II Korintiana 4 : 7 – 15
Nahoana no avelan’Andrimanitra ho voafatotra ny olony ?
Manasa anao hanaraka ny tantaran’I Samsona
Samsona lehilahy miavaka , notahian’Andriamanitra manokana ary noho izay tombony ananany izay no nialonan’ny olona azy . Nofatorana mahazaka 2 vaovao izy araka ny tantara.[tena mafy ny fatotra]
Inona no tian’ny Tenin’Andriamanitra ambara amintsika ?
1- Avelan’Andriamanitra mitranga ny faharesena
Iarahan’ny rehetra mizaka ny fahasarotan’ny fiainana amin’ny endriny maro samihafa na ny manana ny Tompo na ny tsy manana ny Tompo . Eo am-piatrehana ireny fiainana ireny no anararaotan’i satana idirana an-tsehatra ka mitarika ny olona hanao fomba ratsy maro ary dia manjary lasa mifatotra na voafatotra .
Fa moa tsy hain’Andriamanitra ve no manavaka antsika tsy ho tafiditra isan’izay mifatotra , toa ity nanjo an’i Samsona ?
Lesona : Manezaka, mafy ny fahavalo hamatotra sy handavo antsika , misy ny manakora , misy ny mamatotra , misy ny mampatahotra sns …. Avelan’Andrimanitra hanao izay tiany atao izy ; mba hanambaran’Andriamanitra ny Tenany ary hanamarinany izay Teny naloaky ny vavany fa Azy ny fahefana ary tsy misy zava mahagaga izay tsy hainy atao.
2- Tsy natao hampiala amin’Andriamanitra ny fizahan-toetra
Ho an’ny olona manana ny Tompo , ny zava-tsarotra sedrainy na toy inona na toy inona endrika isehoany; dia ireny no antsoina hoe fizahan-toetra. Tsy vitsy ny miala amin’Andriamanitra rehefa tojo ny fanakorana sy ny famatorana toy ireny ka mitady izay vahaolana haingana indrindra hanafahana ny tenany. Dia lasa mitady hery hafa ivelan’ny herin’Andriamanitra.
Lesona : Tsy natao hampiala amin’Andriamanitra ny fizahan-toetra. Fantaro fa ao anatin’ny tafiotra mafy sedrain’ny olon’Andriamanitra , dia tsy mitazam-potsiny akory ny Tompo , fa tena mizaha toetra ny finoanao na tena miorina marina ao amin’Andriamanitra ianao na tsia. Tena tsy mahasoa antsika ny miala amin’Andriamanitra.
Hafatra : Ry havako malala, na dia manezaka mafy aza ny fahavalo mamatotra ny olon’Andriamanitra , iomehezany fotsiny ireny ary ambarany fa tsy mila olona hanampy akory Izy fa Azy ny fahefana hamaha ny fatoran’ny olony. Trosa , haratsian-toetra , fialonana , halotoam-po , teny ratsy , fijangajangana , toaka , halatra , lainga sns…..Mety efa misy manakora ianao amin’ireny , mety mitanondrika mihitsy ianao mibaby ireny enta-mavesatra ireny .
Miantso anao Jeso hoe : “Ento eo Aminy fa Izy no manafaka anao cf Jao 8 : 36. Aoka tsy ho kivy na amin’inona na amin’inona ary manàna finoana fa Zanany ianao , asan’ny tanany ka dia adididny irery ihany. Aoka tsy hierikerika manoloana fanakoran’ny hafa fa mbola ho menatra izy aoriana kely ao cf Sal 23 : 5
Marthe Hervé ; Mpanompovavin’Andriamanitra
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 23 juin 2014